C/weli Gaas oo hadalkii madaxweyne Xasan Sheekh ku tilmaamay mid nacasnimo ah (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
C/weli Gaas oo hadalkii madaxweyne Xasan Sheekh ku tilmaamay mid nacasnimo ah (DHAGEYSO)
Madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas oo maanta gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa jawaab kulul ka bixiyay hadal dhawaan kasoo yeeray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaantaan sheegay in Puntland ay ka kooban tahay labo gobal iyo bar, taas oo uu madaxweyne Gaas ku tilmaamay mid nacasnimo ah islamarkaana uu Xasan Sheekh arrinkaasi doorasho ku raadinaayo.
“Waxaa rabaa inaa jawaab yar ka bixiyo, hadal aan isleeyahay waa hadal nacasnimo ah, oo uu madaxweyne Xasan Sheekh yiri, kaas oo ahaa inuu yiri Puntland inay tahay laba gobol iyo bar, waxaana taasi ka muuqata in dal uu xukumaayo uusan kala aqoonin, doorashada ayuu dhinac uga jiraa, marka ma garan karo waxa uu hadalkaasi ku yiri” Sidaasi waxaa yiri Madaxweyne Gaas.
Dhinaca kale, madaxweyne Gaas ayaa sheegay in Puntland ay ka mid tahay gobaladii 18-ka ahaa, markii horena lagu aas-aasay 5-gobol, maantane ay tahay 9 gobol, isagoona dhinaca kale hadalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku tilmaamay mid aanay Puntland waxba u dhimeynin.
“Hadalka Xasan Sheekh Maxamuud Puntland kuna yaraan meyso, kuna weynaan meyso, Puntland waxaa lagu aas-aasay 5-gobol oo ay ka mid tahay Buuhoodle, maantane waa 9-gobol, hadii uu Xasan Sheekh aqoonin maanta anagaa bareyno, ha dhageysto, hana barto” Ayuu madaxweyne Gaas hadalkiisa kusoo gaba-gabeeyay.